Ny zanako kely dia tsy te hatory eo am-pandriany, inona no hataoko? | Tontolo alika
Ny zanako kely dia tsy te hatory eo am-pandriany, inona no hataoko?
Rachel Sanchez | | Training
Ny fiankinan-doha dia olana mahazatra amin'ny fitondran-tena, indrindra amin'ny alika kely, ary ankoatry ny zavatra hafa, mety hanelingelina azy io alohan'ny hatory. Matetika ny alika dia te-hizara ny fandriantsika manokana, mihombo na mitomany mandritra ny alina raha misoroka azy io isika. Amin'ny fotoana sy ny faharetana dia afaka mamaha azy isika.
Voalohany, tsy maintsy hazavaina fa ity fihetsika ity dia mamaly ny fihetsika voajanahary eo amin'ny alika, satria biby omby avokoa izy ireo amin'ny lafiny rehetra. Izany hoe, ao anaty tontolo iainana dia miara-matory daholo izy ireo, mba hahafahana mifanafana amin'ny alina mangatsiaka ary mifampiaro amin'ny loza mety hitranga.
Mikasika ny fifandraisany amin'ny olombelona, ​​ireo manam-pahaizana momba ny fitondran-kaninina dia manamafy fa ny matory eo akaikin'ny alikanay dia tsy mila manisy ratsy azy na amintsika, amin'ny fomba fanaovan-tsasatra azy eo am-pandriany ihany koa dia tsy ratsy. Antsika ny safidy, ny maha-soa sy fanabeazana ny biby hatrany ny laharam-pahamehana.
Fanazaran-tena sy fahazarana mihinana tsy tapaka
Raha tsy mandany ny heriny amin'ny alàlan'ny diabe sy hetsika ara-batana ilay alika dia ho sarotra kokoa aminy ny hatory. Noho izany antony izany dia zava-dehibe ny fametrahana fahazarana mandeha an-tongotra roa na telo isan'andro, ny faharetany dia miankina amin'ny toetran'ny biby; raha mazoto be ianao dia tsara kokoa ny mandeha an-tongotra lava. Aorian'izany dia azo antoka fa hahatsapa ho tony ianao ary te hiala sasatra.
Etsy ankilany, tsy maintsy jerena fa mitaky fotoana ny fandevonan-kanina, ka tsara kokoa ny manome azy sakafo hariva farafahakeliny adiny roa alohan'ny hatory.
Mba hahatratrarana izany matory eo am-pandrianao, tsy maintsy manome toerana mety amin'izany isika. Tokony ho zorony izay tsy dia be ny fivezivezena na ny tabataba, satria ny alika dia biby mora tohina indrindra amin'ny fanentanana samihafa manodidina azy. Ny mari-pana sy ny hazavana ao amin'ny efitrano dia tsy maintsy ho ampy ihany koa.
Mila manome fandriana malefaka sy madio koa izahay; Ao amin'ny fivarotana biby fiompy manokana dia ahitantsika modely tsy misy farany azo ovaina amin'ny haben'ny biby sy ny toetrany. Na dia aleon'ny alika sasany aza ny toerana malalaka, ny hafa kosa mahazo aina kokoa amin'ny trano kennel na karazana efitrano hafa. Ny zava-dehibe dia ny fahatsapanao fa voaro sy milamina ianao.
Araka ny efa nolazainay teo aloha, mahazatra ny alika mimenomenona na mibontsina rehefa tsy avelantsika hiakatra eo am-pandriana izy. Zava-dehibe ny hijoroana mafy ary tsy hanaiky lembenana. Raha tokony manafosafo azy na mamaly ny antsony isika dia tokony tsy hiraharaha ny fihetsiny, na dia mahasosotra azy aza izany. Tsy hanampy antsika hiantsoantso izy na hananatra azy, fa ny tena mahomby dia ny fampiasana feo sy teny tsara fanahy.
Ny fanamafisana tsara no ho mpiara-miasa lehibe amintsika. Ny tetika tsara dia ny manao fanazaran-tena mandritra ny andro, manome azy hitsaboana sy manafosafo azy isaky ny mandry eo am-pandriany izy. Amin'izany no hampifandraisanao amin'ny zorony amin'ny fahatsapana mahafinaritra.
Ity vanim-potoana fampifanarahana ity dia mety ho lava sy lafo, satria 7 andro eo ho eo no tombanana mandra-pahatongan'ny biby ny toerana tokony handalovany ny alina. Tokony hanam-paharetana isika ary hanatanteraka ireo toro-hevitra ireo isan'andro, tsy mila famoizam-po, satria mety hahatonga ny alika hitebiteby kokoa izany. Raha mitohy ny olana dia tsara kokoa ny manatona mpampiofana matihanina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ny zanako kely dia tsy te hatory eo am-pandriany, inona no hataoko?